सांसद नचिन्ने सरकारी समाचार एजेन्सी – MySansar
सांसद नचिन्ने सरकारी समाचार एजेन्सी
Posted on January 24, 2019 January 24, 2019 by Salokya
एकनाथ ढकाललाई चिन्नुहुन्छ हैन? हो, उही व्यक्ति जसले अस्ति भर्खर जिसस पुत्रीलाई काठमाडौँ बोलाएर होली वाइन खुवाए। जसका कारण सरकार र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समेत बदनामी भयो। उनै महान् एकनाथ ढकाललाई आज सरकारी समाचार एजेन्सी राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) ले सांसद भन्दै फोटो क्याप्सन लेखेको रहेछ।
एकनाथ ढकाल नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष थिए। तर उनले एमालेमा यो दल विलय गराएका थिए, चुनावअघि नै। एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएर नेकपा भइसकेका कारण अहिले उनी नेकपाका नेता हुन्। एमालेले ढकाललाई समानुपातिकमा उम्मेदवार बनाएको थियो।
समानुपातिकको बन्दसूचीमा नाम रहेका कारण मात्र सांसद भन्न मिल्दैन। त्यसमा रहेका नाममध्ये फलानो फलानोलाई सांसद बनाउनु भनेर दलले पत्र लेखेको हुनुपर्‍यो र त्यसलाई सबैकुरा जाँच गरेर निर्वाचन आयोगले विजयी घोषणा गर्नुपर्‍यो। अनि मात्र सांसद निर्वाचित हुन्छ र सांसद भन्न पाइन्छ।
तर राससले भने यत्तिकै ढकाललाई सांसद घोषणा गरिदिएछ। राससलाई कसले सम्झाइदिने- ढकाल अहिलेका सांसद हैनन्, संविधान सभा हुँदाका सांसद हुन् भनेर।
सांसदै नभएको मान्छेको दुई दुई वटा फोटो राससले के राष्ट्रिय महत्वको ठानेर पोस्ट गरेका हुन् कुन्नि ! कि राससलाई राम्रैसँग होली वाइन लागेको हो?